को बन्ला जापानी प्रधानमन्त्रीका उत्तराधिकारी ? (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
को बन्ला जापानी प्रधानमन्त्रीका उत्तराधिकारी ? (भिडियोसहित)
१६ भाद्र २०७७, मंगलवार १३:२७
जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले स्वास्थ्य समस्याका कारण राजीनामा गर्ने आफ्नो योजना घोषणा गरेपछि देशको सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका आवेको उत्तराधिकारी को हुन सक्छ भन्ने कुरा चर्चामा रहेको छ । विकल्प तयार भइसकेको देखिँदैन । यहाँ केही सम्भावित उम्मेदवारहरूको पार्टीगत भूमिकाबारे चर्चा गरिएको छ ।
वित्तमन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोहोरो जिम्मेवार सम्हाल्दै आएका ७९ वर्षीर्य तारो एसो लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको पाका नेता भए पनि सम्भावित उत्तराधिकारी हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । आवेका निकट सहयोगी एसोले सन् २००८ देखि सन २००९ सम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर उनले सन् २०१२ देखि उपप्रधानमन्त्री र वित्तमन्त्रीका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । सन् २००९ मा सत्ताधारी एलडीपी पार्टीले नराम्रो पराजय व्यहोरेसँगै एसोले प्रधानमन्त्रीको पद त्याग्नु परेको थियो । लामो समयदेखि उनले उच्च पदमा पुग्ने आशा राखे पनि आवेको आर्थिक सुधारको नाराले उजी छायाँमा पर्दै आएका छन् ।
उनको लामो राजनीतिक जीवन बुढापाका व्यक्तिमा सरकारी लगानी खेर फाल्नु नहुने भन्ने विवादास्पद भनाइका कारण बारम्बार छायाँमा परेको छ । उनले संवैधानिक सुधार गर्ने समय जर्मनी नाजीबाट सिकेर सरकारी लगानीलाई जोगाउनु पर्ने भनी दिएको प्रतिक्रियाले एलडीटीमा ठूलै विवाद ल्याएको थियो । उनले सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका वेला व्यापक आर्थिक प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
पूर्व रक्षामन्त्री शिगेरू इशिबा एक सैन्यकुशल क्षमता भएका नेता हुन् । पप संगीतको फ्यान भएका कारण युवाजगतमा उनी लोकप्रिय हुन् । पुरानो बैंकर तथा राजनीतिक परिवारका सदस्यसमेत रहेका इवेरूको सरकार सञ्चालनमा महत्वपूर्ण अनुभव रहेको छ । उनलाई जापानको राजनीतिक क्षेत्रमा प्रखर वक्ताको रूपमा हेरिन्छ । उनी केवल २९ वर्षमा जापानको संसद सदस्यमा निर्वाचित भई आएका हुन् । आबेले जस्तै इशिबालाई आफ्नो कार्यक्रमको सशक्त प्रतिवाद गर्न सक्ने नेताका रूपमा लिइन्छ । उनले संविधानमा देशको आत्मरक्षा बलको भूमिकालाई शान्तिपूर्णरूपमा अझ मजबुत बनाउन चाहन्छन् । जापानले आफ्नो माटोमा आणविक हतियार निषेध गर्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ कि हुँदैन भन्ने कुरामा उनी मध्यम धारको धारणा राख्ने व्यक्ति हो ।
उनी पनि लामो समयसम्म मन्त्री परिषदमा काम गरेको अनुभव छ । आबेको सफलतामा जनसमर्थन त प्रमुख थियो नै उनका मन्त्रीहरूको पनि उत्तिकै अहम् भूमिका रहेको थियो । कुनै समय एलडीपीकबाट अलग भएका इशिबा दलकै सांसदहरूबीच कमै लोकप्रिय मानिन्छ । उनले सन् २०१८ मा एलडीपीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वका लागि भएको निर्बाचनमा भारी मतले आवेसँग पराजित भएका थिए । इशिबाले कुनै समय दल परित्याग गरेको भएपनि एलडीपीले उजको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।
आबेको पहिलो कार्यकालपछि विश्वासिलो सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमाएका ७१ वर्षीय योशिहिदे सुगा प्रधानमन्त्रीका अर्का बलिया दावेदार मान्न सकिन्छ । सन् २०१२ मा आबे पुनः सरकारको नेतृत्वमा फर्केपछि उनले सुगालाई मन्त्रिपरिषद्को मुख्य सचिव नियुक्त गरेका थिए । जापानमा मन्त्रिपरिषद्को मुख्य सचिवलाई एक शक्तिशाली पद मानिन्छ । मुख्य सचिवले सरकारी मन्त्रालयहरू र सत्तापक्षको प्रयासलाई समन्वय गराउने गर्छ । उनी प्रायः सरकारको अनुहार पनि हुन्थे । नियमित पत्रकार भेटमा सरकारको तर्कपूर्ण प्रतिरक्षा गर्न तथा नयाँ सम्राट नारुहितोको आरोहणको चाँजोपाँजो मिलाउने रेवा युगको घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व आवेले सुगालाई नै दिएका थिए ।
वंश राजनीतिको पृष्टभूमिबाट आएका नेता र पूर्व टेक्नोकर््ेयाटहरूले भरिएको सत्ताधारी पार्टीमा उनी किसान परिवारबाट आफ्नै बाहुबलले सांसद हुन सफल लोकप्रिय नेता हुन् । सुगाले आफ्नो माध्यमिक विद्यालयस्तरको पढाइपछि टोकियो प्रवेश गरे जहाँ उनले रात्रिकालिन विश्व विद्यालयस्तरको पढाइका लागि सस्तो श्रमको सहायता लिँदै अध्ययन पूरा गरेका थिए । उजी सन् १९८७ मा योकोहामाबाट नगरसभाको सदस्य निर्वाचित बनेका थिए भने सन् १९९६ मा जापानी संसदको तल्लो सभामा निर्वाचित भएका थिए ।
अहिले सत्तारुढ पार्टीको नीति प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका पूर्व विदेशमन्त्री फुमिओ किशिदा प्रधानमन्त्रीका अर्का दावेदार हुन् । उनलाई प्रायः आबेको मनपर्ने नेता तथा प्रवल उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । तर उनको नरम बोली र करिश्माको अभाव उत्तराधिकारीको सम्भावित अवरोधका रूपमा आउन सक्ने बताइन्छ । किशिदाको पहलमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई प्रथम विश्वयुद्धका समय अमेरिकाद्वारा खसालिएको अणुवमका कारण ध्वस्त भएको शहर हिरोसिमामा ल्याउने साहसी तथा नवीन कार्यका लागि ख्याति कमाएका छन् ।
त्यस पहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिका हैसियतमा कसैले पनि हिरोसिमामा पाइला हालेको थिएन । उनकै समन्वयमा जापान र दक्षिण कोरियाबीच सन् २०१५ मा भएको राजनीतिक सम्झौता भएको मानिन्छ । उनी हिरोसिमाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । सम्झौताको उद्देश्य जापानको कब्जाको क्रममा यौन दासहरुको प्रयोगलाई लिएर ती मुलुकहरुबीचको लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद समाप्त गर्नु हो ।
रक्षामन्त्री तारो कोनो कुनै समय महत्वाकांक्षी र स्वतन्त्र विचारधारा भएका राजनीतिक सुधारक मानिन्थ्यो । तर ५७ वर्षीय नेता कोनो हालका वर्षहरूमा आबेको मन्त्रिपरिषद्को एक महत्वपूर्ण सदस्यको रूपमा आफ्नो विचारलाई त्यागेको पाइन्छ । कुनै समय बेलायत अधिनस्थ रहेको जर्जटाउनमा आफ्नो उच्च शिक्षा हाँसिल गरेका कोनो रक्षामन्त्री हुनुअघि सरकारमा सुधारको पक्षमा वकालत गर्र्ने मन्त्रीको रूपमा चिनिन्छ । उनले जापानको शीर्ष कूटनीतिज्ञको रूपमा विभिन्न देश र उच्च अधिकारीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध जोड्ने मौका पनि पाएका छन् । उनले यस पहिले सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी थिए । उनको दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध सुधारका लागि समन्वयकारी भूमिका रहेको मानिन्छ ।
हालका वर्षहरूमा उनले सरकारको आधिकारिक समर्थन दिएर आणविक शक्तिसँगको आफ्नो उत्कट विरोधको बारेमा छलफल गर्न धेरै हदसम्म रोकेका छन् र आफ्नो स्वतन्त्र छविको बाबजुद उनी एसो र सुगा दुबैको विश्वास जित्न सफल मानिन्छन् । कोनोले जापानी र अँग्रेजीमा व्यक्तिगत ‘ट्विटर अकाउन्ट’हरू सञ्चालन गरी सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थितिबाट आफूलाई अन्य नेताभन्दा नागरिकसँग बढी साक्षात्कार गराई भिन्न देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
५ जना प्रतिश्पर्धामा, जापानी प्रधानमन्त्रीका उत्तराधिकारी
Prevनिषेधाज्ञाको १३ औँ दिन काठमाडौंको वसन्तपुर यस्तो देखियो (फोटो फिचर)
औद्योगिक क्षेत्रबाट माग भएपछि केही मात्रामा बढ्यो कर्जा लगानीNext